IKRELE ELITYENI LELINYE LAWONA MABALI MABALASELEYO KAKING ARTHUR - DISNEY
Amantshontsho Amancinci Alishumi Elinanye
I-Disney ye-Sword kwiLitye ihlala enye ye-King Arthur Adaptations
UWalt Disney wasebenza kwiifilimu ezimbini zokugqibela ngaphambi kokuba asweleke. Eyokugqibela iya kuba Incwadi yeJungle , wakhululwa iinyanga ezilishumi emva kokudlula kwakhe, kodwa Ikrele Elityeni ingayifilimu yokugqibela ekhutshwe ebomini bakhe. Ngokukhululekileyo isekwe kwi-T.H White's UKumkani kanye noKamva , Ifilimu ihambisa enye yezona zinto zilungele uKing Arthur kuba ijolise kuphela ekubaliseni ibali elonwabisayo.
Endaweni yokuzama ukuba yindalo enkulu, Ikrele Elityeni endaweni yoko, ulungile u-Bildungsroman obonisa u-Arthur ngokuziphendukela kwenkwenkwana ebizwa ngokuba yi-Wart yintsapho yakhe, ukubonisa ububele, ubukrelekrele, isibindi kunye nokunyaniseka okuya kuthi ekugqibeleni kumenze abe yinkosi elungileyo (ye ubukhulu becala).
Kwakhona, ifumene uMadame Mim, ngubani omkhulu.
Kwiindawo ezininzi zokuziqhelanisa, i-Arthur's Chosen One status inokuphazamisa, ngakumbi xa ingaboniswanga inomdla okanye inyanzelisa. Ukuqaqambisa u-Arthur kunye nokubonisa imvelaphi yakhe ethobekileyo kwenza ukuba abaphulaphuli babe yingcambu yakhe ngakumbi. Ngokungafaniyo nencwadi, apho uSir Ector noKay banobubele kakhulu kuWart / Arthur, ifilimu ibenza babe lusapho olunzima ngakumbi olukunceda ukuba uvelane naye.
Kuwo wonke lo mboniso bhanyabhanya, ukhokelwa yintsingiselo entle kodwa eyilahle uMerlin, oxelela inkwenkwe ukuba yenzelwe into enkulu kwaye uchitha imovie ukuyiguqula kwaye uyibeka kwimeko zokufa. Ukukhula. Ngalo lonke elixesha, isifundo ngasinye sikaMerlin sibeka uWart engxakini nosapho lwakhe lokumkhulisa kuba lubangela ukuba ayeke imisebenzi yakhe. Ngaphandle kwento yokuba uWart ufuna ukufunda, ufuna ukubanendawo phakathi kosapho lwakhe njenge squire.
tracee ellis ross ubomi bomntu
Xa elibala ikrele likaKay kwindlu yabahambi ngexesha lejoust ebalulekileyo, uWart ugqiba nje ukuza ngaphaya kwekrele le-titular elityeni kwaye alukhuphe-hayi yena, kodwa ngenxa yokuba uKay kufuneka abe nekrele. Njengoko ebuya nayo, akukho mntu ukholelwa ukuba wayikhupha, kwaye bafuna i-Wart yenze kwakhona. Uyakwenza, kwaye ngequbuliso, iWart iba nguKing Arthur.
Ngaphandle kwabagxeki besithi inebali elincinci, ndiyayithanda le movie kuba yayiqonda ukuba imibuzo iyinxalenye yamabali ama-Arthurian. Inguqulelo encinci encinci yeWart iyaqhubeka yindlela emnandi yokubonisa ukuba ungubani njengomntu-njengaxa laa squirrel wasetyhini ethandana naye kwaye engazukuhamba. Uyamcaphukisa, kodwa emva kokuba emsindisile kwaye edandathekile ukuba uyinkwenkwe yokwenene, uWart uziva enovelwano ngaye.
Nokuba sele engukumkani kwaye uEctor equbuda kuye, uyabona ukuba iWart ayiziva ikhululekile ukuba wonke umntu amnqule kwaye akaziva enobubi kwabo bamphethe kakubi.
I-Wart ibonisa iinjongo zento uKing Arthur kufanelekile ukumela: inkokeli engafuni luzuko, imamela ingcebiso elungileyo, kwaye njengabanyuliweyo abaninzi, wakhuliswa ukuze azi ixabiso lomsebenzi olungileyo. Isenokungabi lolona hlobo luchanekileyo, kodwa inomphefumlo webali elikhulu laseArthurian- kunye, nemicimbi yokuvuma engathandabuzekiyo.
Ndoda, ndiyathemba ukuba unomatse wenza kakuhle.
Ixesha loluntu 5 isiqendu 3
Ujames S Ngumxholo
abagcini begalaxy 2 brandy
bulala comte okanye uyeke
izinto ezibonakala ngathi zizinto
UMichael Keaton Ibali lokudlala 3
ishire ukuya mordor ukuhamba